We Fight We Win. -- " More than Media ": တက်မည် ။ ကျိန် မည်။
တက်မည် ။ ကျိန် မည်။
ဒီချုပ် ကျမ်းကျိန်မည်၊ ပါလီမန်တက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။
I do politics but i have no brain.Whatever Kyaw Hein do,always right.I worship Aunty Su personal.If she say the sun set from west to east,its true.I m idiot.comments?
How about the promise 1990?When she can not do for country,she abandon and said i cant do alone.If u want to get change,do it urself.Comment?Ko Mg Mg one
ကျမတို့ အစကတည်းကလည်း ပျော့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အမြဲပြောတယ်။ ကျမတို့ မပျော့ပြောင်းတဲ့နေရာက ဒူးခေါင်းပဲ ရှိတယ်။ ဒူးတော့ မထောက်ဘူး။ အခြားနေရာတွေ ကတော့ ပျော့ပြောင်းပါတယ်လို့ ကျမအမြဲပြောခဲ့ပါတယ်။ “ကျမ်းကျိန်လွှာကိစ္စက ပြည်သူတွေကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကျမတို့ရဲ့ကတိတွေကို ကျမတို့က ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့က အခုလုပ်နေတာတွေက ကျမတို့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက ကတိပေးခဲ့တာတွေနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိဘဲ အကောင်အထည်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ တမျိုးပြော၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါ တမျိုးပြော အဲဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာ NLD မပါဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသ
WHAT A SHAME NLD, USDP IS NOW LAUGHING THEIR ASS OFF.
NLD LEARN THEIR FIRST LESSON.
TIS IS JUST BEGINNING MANY MORE TO COME